Kedu otu esi ebuli ndepụta Amazon maka SEO ụzọ kacha mma?
Gini mere edere Amazon gị kwesịrị iji SEO kachasị mma?
Ọ bụ ezie na a mara ọkwa ahịa a na-ere ahịa na-enye ihe dị nde 488 nde, ọ nwere ọtụtụ nde ndị na-azụ ahịa na-achọ ihe dịnụ n'ebe ahụ. Ọ bụ ya mere ị ga-eji chọpụta ebe ị na-edepụta aha Amazon bụ SEO-kachasị mma. Ma ọ bụghị ya, ihe ndị ị na-ere maka ire ere na Amazon agaghị enwe ike ịchọta ezigbo onye na-azụ ahịa, nri?
N'ikpeazụ, e nwere ọtụtụ isi ihe nwere ike inyere gị aka ịchọta ngwaahịa gị dị mma n'ọchụchọ Amazon. Nke a bụ ihe kacha eme ka ederede Amazon ọ bụla zuo ezu maka SEO zuru ezu:
Nchịkọta ihe nke onye otu site na ndepụta ndepụta, dị ka Mpịakọta Mpịakọta, Nkọwapụta Ihe, na ndepụta nke Mpịakọta Ihe;
Nyochaa ndị ahịa na ọnụ ọgụgụ ha ọgbọ ma ọ bụ / na nyochaa ejiri aka;
Ọnụego mgbanwe (ma ọ bụghị, ole edere ndị ọbịa ka ha ghọọ ndị na-ere ahịa n'ezie);
Ụdị ego a na-ere, na oge nke ihe ịga nke ọma na-eme atụmatụ maka Ndepụta Ngwaahịa gị.
Atụmatụ na usoro maka Ịchọta Amazon Lusting SEO-kachasị mma
Ọ bụ onye na - , ma ọ ga-abụ ihe dị mma ịkọwapụta ngwaahịa gị - naanị nyochaa ndị ọkachamara kachasị mma gị ma ọ bụ ndị na-ahụ maka egwuregwu iji hụ ihe na-arụ ọrụ maka ha, na ihe a ga-ezere n'otu oge ahụ - cream headpieces. Ya mere, na-agba ọsọ nyocha ịsọ mpi bụ ebe dị mma ị ga-esi jiri ndepụta Amazon dee SEO. Ihe bụ na ọ dịghị mkpa na ị ga-ele anya na ndị ọ bụla kachasị ere ahịa na mpaghara gị ma ọ bụ ngwaahịa ngwaahịa. Ọ ga-aka mma ka ị lekwasị anya na utu aha ngwaahịa, nkọwa ngwaahịa na ndepụta nke ihe mgbochi ndị ndị iro gị kacha nwee ihe ịga nke ọma n'ebe ahụ. N'ịme nke ahụ, ị ​​ga-enwe ike ịchọta echiche siri ike na nghọta bara uru nke okwu okwu na ọchụchọ ga-enyere gị aka. Iji nweta nghọta zuru oke maka uru ndị kachasị mma ahịa gị na-eme, ị nwere ike iji ụfọdụ ndị na-enyere gị aka n'ịntanetị dị ka Google Keyword Planner (nchọpụta nchịkọta maka mkparịta ụka dị mkpa). ndepụta ngwaahịa), yana Onye nlere anya isiokwu (ihe niile nwere ike ịhụ kpọmkwem ihe ederede ndị kachasị gị na ya dị mma).
Nke abụọ: Gị Onwe Gị Research Research
Ozugbo ị nwetara nnukwu foto nke ndepụta Amazon nke ndị akara gị na-achịkwa n'ebe ahụ, ọ bụ oge ịgba ọsọ nyocha nke onwe gi. Ekwadoro m na ịmalite site na ịmepụta ndepụta nchịkọta nke isiokwu dị mkpa na nke ọzọ okwu ogologo oge nke ndị na-azụ ahịa na-arụsi ọrụ ike maka nchọpụta ngwaahịa. Ihe bụ na ọtụtụ ihe, òkè ọdụm nke ndị ọrụ na-azụta ihe na Amazon adịghị n'ezie na-abịa ebe ahụ iji chọgharịa. M pụtara na ha na-abịa Amazon search ugbua nwere ihe ụfọdụ n'uche. Ya mere, ihe niile ị chọrọ bụ ikwe ka ụlọ ọrụ ọchụchọ ahụ na-ejere ha ozi maka nzube ahụ. Ọ bụkwa ya mere ị ga-ahọrọ usoro ọchụchọ ziri ezi bụ akụkụ kachasị mkpa n'ime ihe niile. Iji mezue ọrụ ahụ, ana m akwado ịmegharị nyocha nke onwe gị na iji otu n'ime ihe ndị a na-agbakwunyere na ngwaọrụ ndị a na-esote kpọmkwem: Akara, AMZ Tracker, Unicorn Smasher, Merchant Words, wdg. Ha nile bụ ihe eji eme ya, ya mere ọ bụ n'ezie nye gị aka ikpebi onye ị ga - ahọrọ.